Ijubane lekhasi nezivakashi zakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 6, 2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Esinye sezici okunzima kakhulu noma kubiza kakhulu ukusithinta ijubane lapho isayithi lakho lilayisha khona. Le yimpi engapheli lapha kuMartech… ukuhlanganiswa kwezenhlalo nokukhangisa kwehlisa ukulayishwa kwekhasi izikhathi, phansi ngakho-ke sihlala sizama ukusihlela ngezindlela eziningi. Siyazi ukuthi silahlekelwa ezinye izivakashi ngenxa yayo - ikakhulukazi uma kunethrafikhi eningi.
Ezinye izinkampani azithathi ngokungathi sína izikhathi zokulayisha, kepha zinomthelela omkhulu ekhonweni lesayithi lakho lokubandakanya nokuguqula amakhasimende. Case iphuzu, I-kissmetrics hlanganisa le infographic ekhombisa ukulahleka.
Uma isayithi le-e-commerce lenza u- $ 100,000 ngosuku, a Ukubambezeleka kwekhasi lesibili kungahle kukubize u- $ 1 million ekuthengiseni okulahlekile minyaka yonke.
Tags: ERPeholaulayini ubudeSageumhlahlandlela wezokuxhumanaithelevishini